मुंगडाको आलोचना - बलिउड - साप्ताहिक
बलिउड चलचित्रमा अचेल रि–क्रिएटेड गीत (पुराना गीतको नयाँ संस्करण) को युग चलिरहेको छ । त्यसैले अहिले हरेक नयाँ चलचित्रमा पुराना चलचित्रका गीतको नयाँ संस्करण सुन्न पाइन्छ । हालै अजय देवगणको चलचित्र टोटल धमालको आइकोनिक गीत ‘मुंगडा’ लाई नयाँ संस्करणमा प्रस्तुत गरियो । डान्स क्विन हेलेनको उक्त गीतलाई सोनाक्षी सिन्हाले टोटल धमालमा रि–क्रिएट गरेकी छिन् ।
गीतमा सोनाक्षीको फिटनेस, नृत्य तथा प्रस्तुति उत्कृष्ट छ । यद्यपि, दर्शकलाई मुंगडाको नयाँ भर्सन मन परेन । पुरानो मुंगडा झैं नयाँ मुंगडाले उधुम मच्चाउने निर्माताहरूको अनुमान थियो । यद्यपि, त्यसको ठीकविपरीत उक्त अँइटम नम्बरप्रति सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक ट्रोल बन्न थाले । टिप्पणी गर्नेहरूले बलिउडमा अब कुनै सिर्जनात्मकता बाँकी नरहेको आरोप लगाउँदै सबैले पुराना सुन्दर सिर्जनाहरूलाई बर्बाद गरिरहेको बताएका छन् ।
कतिपयले त यसलाई हेलेनको गीतकै बेइज्जत गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । वास्तविक गीतका सर्जकहरूले पनि यस विषयमा मुख खोलेका छन् । संगीतकार राजेश रोशनले भनेका छन्–‘मलाई लाग्छ संगीत उद्योगमा प्रेरणा कम तथा पसिना अधिक छ । चलचित्र निर्मँताहरूले नयाँ गीत निर्माणको आत्मविश्वास नै गुमाएका छन् ।’
मिस नेपालको आलोचना, विरोध, धर्नाजस्ता गतिविधि किन हुन छाड्यो ?
किन नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ सामाजिक सञ्जाल ?
विश्वकपले फेर्‍यो रूसको छवि